Webiga Shabeelle oo laga cabsi qabo in uu fatahaad ka sameeyo Shabeelaha Dhexe. | Dayniile.com
Home Warkii Webiga Shabeelle oo laga cabsi qabo in uu fatahaad ka sameeyo Shabeelaha...
Webiga Shabeelle oo laga cabsi qabo in uu fatahaad ka sameeyo Shabeelaha Dhexe.
Xildhibaan Cumar Maxamed Cumar oo xubin ka ah Baarlamaanka DG Hir-Shabeelle ayaa sheegay in cabsi xooggan oo la xiriirta Fatahaad uu sameeyo Webiga Shabeelle ay ka taagan tahay Degmooyin katirsan Gobolka Shabeelaha Hoose.
Xildhibaanka waxa uu sheegay in Dadka degen Degmooyinka Jowhar, Mahadaay & Balcad ay welwel ka qabaan in uu markale fatahaad ku sameeyo Webiga Shabeelle oo haatan buux dhaafiyay sida uu hadalka u dhigay.
“Jowhar, Mahadaay & Balcad weli dadka kama soo kabsan fatahaaddii uu ku sameeyay Webiga Shabeelle, waxaa la galay Xiliga deyrta oo biyo badan ayaa ku hooraya Webiga” Sidaasi waxaa yiri Xildhibaan Cumar Maxamed Cumar.
“Buqda Boodaale ayaa Degmada Balcad ku furtay biyo badan weli lama xirin, xalka keliya waa in la sameeyaa kahortag wadajir la isaga kaashado si meelaha fatahaadaha uu ka sameynayo Webiga loo dhigo Jawaanno” ayuu yiri Xildhibaan Cumar.
Webiga Shabeelle ayaa fatahaad uu ku sameeyay Gobolka Shabeelaha Dhexe April, May & June waxa ka dhashay barakac, dhul beereed badan oo ba’ay & burbur gaaray qaar kamid ah xaafadaha Degmada Jowhar.
Xukuumadda Federaalka & DG Hir-Shabeelle ayaa wadajir u sheegay in ay iska kaashanayaan wax ka qabashada fatahaadda Webiga Shabeelle oo tallaabada keliya haatan la qaado tahay in laga hortago inta uusan karkaarada jabsan.
Previous articleDibad baxyo is ka soo horjeeda oo ka socda dalka Hangari.
Next articleTaliye Baakaay “Aniga waa noolahay, waxaan ku dhex lugeynaa Guriceel”
Cabdullahi Keynaan oo kamid ah xoola dhaqatada ku nool degmada Dhoobley ee ee ku taalla soohdinta Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa muddo bil gudaheed...
Farmaajo oo Qorsheenaya in Uu Xilka Ka Qaado Cumar Filish
War deg deg ah Jadwalka Doorashada Somaliland oo la soo saaray
Ciidamada Danab iyo ciidamada Nabad Sugida Jubbaland oo howlgal qorsheesan ka...